सरकारले धानको समर्थन मूल्य तोके पनि कसैले त्योभन्दा महँगोमा बेच्न पाए भने कतिपयले त्यो मूल्य पाउन सकेका छैनन् । विगतभन्दा यस वर्ष धानको उत्पादन बढेको छ । तर, उत्पादन बढे पनि यस वर्ष पनि किसानले दुःख गरेअनुसार धानको मूल्य नपाएको गुनासो गरेका छन् ।
सरकारले मध्यम धानको न्यूनतम मूल्य प्रतिक्विन्टल साढे २ हजार ८ सय ८५ रूपैयाँ तोकेको छ । तर, केही किसानले अधिकतम मूल्य २ हजार २ सय ५० मात्रै पाएका छन् । अर्थात् सरकारले तोकेभन्दा साढे ६ सय रूपैयाँ कममा उनीहरूको धान बेच्नु परेको छ ।
किसानहरूले सरकारले तोकको धानको समर्थन मूल्य थाहा नपाएका होइनन् । तर, पछि के होला भनेर उनीहरू सस्तोमा नै धान बेच्न बाध्य भएका छन् । किसानले सबै व्यवहार चलाउने धानबाट नै हो । मूल्य धेरै दिन सरकार र सहकारी नआएपछि व्यवहार धान्नका लागि सस्तोमा नै बेच्न बाध्य हुनुपरेको छ । धान भण्डारण गरेको राख्न र आप्mनो गर्जो टार्न विकल्प नभए पनि जति मूल्यमा पाइन्छ त्यतिमै धान बेच्नुपर्ने बाध्यता किसानहरूलाई छ । सरकारले आपूmले तोकेको मूल्यमा धान खरीद गर्ने बताए पनि त्यो सुविधा केही ठाउँका किसानले मात्रै पाएका छन् ।
स्थानीय व्यापारीले किसानहरूलाई विभिन्न लोभ देखाएर तथा समसया देखाएर उनीहरूबाट सस्तोमा धान खरीद गर्छन् । किसान नत धैर्य गर्न सक्ने अवस्था छन्, न त पछि व्यापारीले किनेन् भने सरकारले किनिदेला भन्ने विश्वास नै छ । त्यसैले उनीहरू व्यापारीले तोकेकै मूल्यमा बेचेका छन् ।
सरकारले गत असारमा धान लगाउनुअगावै पहिलोपटक समर्थन मूल्य तोकेको थियो । तर, लगाउनुपूर्व नै समर्थन तोकिएको भन्दै निकै चर्चा भयो । सरकारको प्रशंसा पनि भयो तर किसानले धानको मूल्य व्यापारीले जतिमा भन्छ त्यतिमा बेच्न बाध्य भए । यसले सरकारको काम चर्चाका लागि मात्रै भएको देखाउँछ ।
निःशुल्क खानाको अर्थशास्त्र[२०७७ मंसिर, १२]
सामाजिक सुरक्षा कि असुरक्षा ?[२०७७ मंसिर, १२]
निजीक्षेत्रप्रति भाषणमा माया, व्यवहारमा उपेक्षा[२०७७ मंसिर, १२]
अर्थतन्त्र ओरालो शेयरबजार उकालो ?[२०७७ मंसिर, ५]
कछुवा गतिको विकास[२०७७ मंसिर, ५]